မနှိုင်းသင့်တာကို မနှိုင်းပါနဲ.ဗျာ(၁) ။
ပြောလဲြေ့ပာပြီးပြါ့ပီ ကျုပ် ထပ်ပြောခြင်ရင် ရိုင်းတယ်လို.မထင်ပါနဲ ။ ခရစ်(ရှ) နား။ ဂေါတမ ဗုဓ္ဒ ၊ ယေရှု ၊မိုဟာမက်နဲ ပညာရှိ လူကြီးသူမတွေ ပြောဆိုဆဲ့မတဲ စကားတွေ ထပ်တလဲလဲ ကြားနေရလို. နားညီး ပြီတောင် ယိုနေပါပြီဆိုရင် ။ဘယ်သူ.ကိုမှ မရိုသေ မလေးစား လို.မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ.ရင် ဆိုင်နေရ
တဲ့ ပြသနာတွေကို လက်တွေ ဖြေရှင်းဘို လိုအပ်နေတာ အမှန်ဘဲ . မဖြေရှင်းဘဲ အကြံမပြုဘဲ ၊သူများဟောပြီးသား တရားတွေသာ စွပ်ဟောနေရင်၊ တာဝန်ရှောင်ရာ ရောက်မယ်။ မယောင်ရာ ဆီလိမ်း တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ ဗျာ။
သူတို.တတွေ အားလုံး တခြားလူကြီးသူမ ပညာရှိ သုခမိန်တွေ ဟာ သူနေရာနဲ. သူ ၊ သူချိန်ကာလ သူအခြေအနေနဲ့ သူပြောစရာပြောဟောစရာ ဟော ခဲ့ကြသူ
ူတွေပါ၊ နားထောင်သူရှိတယ် နားမထောင်သူရှိတယ် သူတို. အသက်ကိုရန်ရှာ
သူတောင်ရှိတယ် ၊ အောင်မြင်သူတွေ မအောင်မြင်ဘူး ၊ သူတိုအားလုံးဟာ သမိုင်းမှာ ထင်ရှားသူတွေချည်းပါဘဲ ။
ကိုရင်ကြီးရဲ. မေးခွန်းက၊ ‘ဆရာစံကျဆုံးပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘာလို့
အောင်မြင်သလဲ’ တဲ့၊ အာ ပါး ပါး ၊ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး ကိုရင်ကြီးဆီက လာလိမ့်
မယ်လို မမျှော်လင့်ခဲ့မိဘူး၊. မေးခွန်းများ မှားနေသလား ၊ ဒီမေးခွန်းအတွက်
တော့ ကိုရင်ကြီးကို လေးစားရမလား။ မနေ.ကဘဲ သမာသမ ဆိုတာကို ကိုရင်ကြီးပြောခဲ သေးတော့ ကျုပ်ဖြင့် စဉ်းစားလို.မရနိုင်ဘူး။ ၊ ကိုအောင်ဆန်း
ကိုတော့သူများတွေနဲ့အတူ လေးစားပြီးသားပါ ။ အမေးရှိတော့ အဖြေ ရှိရမှာပေါ့ ၊ ဟုတ်ဘူးလား။၊ ကြားခြင်ရင် နားဆင်ပါခင်ဗျာ ။
မှတ်မိသလောက်ပြောရရင် -- သုပန္နက ဂဠုံ ဆရာစံနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို.ဟာ အချိန်ကာလ ကွာပါတယ် ။ ၁၉၃၀ ခုက ဆရာစံ တော်လှန်ပြီး ၁၉၃၁ ခုမှာ ကြိုးပေးခံရတယ် ၊ အောင်ဆန်းဟာ ဘယ်ရောက်နေမှန်းတောင်မသိဘူး ၊ ၁၉၃၃ ခု တက္ကသိုလ်ရောက်မှ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားးမှု စခဲ့တယ် လို.ဆိုတယ်။ အချိူမှတ်တမ်း တွေမှာ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုအောင်ဆန်း စပြီး ဖွဲ.စည်းလဲတာလို.တောင်ဆိုထားတယ်။
သူတို.အချိန် သူတို.ကာလမှာ ကျုပ်တိုလဲ သူတိုလောက် အရွယ်ရောက် နေမယ်ဆိုရင် လူမျိုးစိတ် နိုင်ငံစိတ်နဲ. သူတိုနဲ့ အတူမပါဘူးလို.မပြော နိုင်ဘူး။ ဆရာစံ သတိလစ်သွားပုံက သီပေါ ပါတော် မူတာကို လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေကို အကဲမခတ် မမှန်းမိဘဲ သူကိုသူ ဘုရင်ကြေငြာ ခဲ့မိတာဘဲ လို.ပြောရရင် ရတယ် ၊ နိုင်းယှဉ်စရာက ရှီတ်စပီးယား ရဲ. ၈ျူးလီးယပ် စီဇာ ဇါတ်မှာ စီဇာဟာ ဂေ့ါ(ဒ)ကင်း ဆိုတဲ့ ဒလိုင်လာမာမျိုး ဖြစ်ခြင် သူ မို. အသတ်ခံရတဲ့ အကြောင်း တခုလဲ ပါတယ် လို.မှတ်သားရဘူးတယ် ။ ဆရာစံ သာ ရှိုတ်စပီးယား ဖတ်မိရင် မြန်မာရာဇ၀င် တမျိုးတမည် ပြောင်းသွားနိုင်တယ် ။
မနိုင်းကောင်းပါဘူး ကိုရင်ကြီးရဲ. ဆရာစံ ဟာ ဆရာစံပါ၊ ၀န်သိုစော်ဘွား အပါအ၀င် မြန်မာ မျိုးချစ် တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် ဗမာ(မြန်မာ)တွေဟာ ၊ ကျေးဇူး ဆပ်လို.မကုန်န်ိင်အောင် ဘယ် အပြင် လူကိုမှ အောက်ကျနောက်ကျ အကူအညီမတောင်း အားမကိုးခဲ့ဘူး ၊ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးတဲ့ လူစွမ်းကောင်း စစ်စစ်ကြီးတွေမှာ ၊ ဆရာစံဟာ တယောက်လို. ကျုပ်မြင်တယ် ၊ သေရဲတယ်၊ သတ်ရဲတယ်၊ ဘယ်ကိုမှ ထွက်မပြေးခဲ့ဘဲ အထက် မြန်မာပြည်က အစ အောက်မြန်မာပြည်အဆုံး တပြည်လုံးကို လှူပ်ခဲ့တဲ ဆရာစံ ပါ ။ ပြန်ကြည့်ပါအုံး ကိုရင်ကြီးရဲ ကျုပ်ရေးတဲ့ ရာဇ၀င်မဟုတ်ပါဘူး။
အင်္ဂလိပ် တုန်တုန်လှုပ်ခဲ့ ပြီး . မြန်မာတိုင်းရင်သား ကရင်တပ်တွေလွတ်ြ့ပီ့း ခြေမှုန်းခဲတာတွေ မှတ်တမ်းရှိတယ်လို. ပြောပါရစေ တော့။ ဗိုလ်ချုပ်
အောင်ဆန်းအောင်မြင်တယ် ဆိုတာဟာ ကိုရင်ကြီး အမြင်အရပေါ့ ။ ဆရာစံနဲ့အပါအ၀င် မျိုးချစ်တွေ စခဲ့ တဲ့ ဇါတ်ကို ကိုအောင်ဆန်းနဲ. တစုက လက်စသပ် ဇါတ်သိမ်းခဲ့တာဘဲ လို.ပြောရင် ကိုရင်ကြီး လက်ခံမလား၊ ဇါတ်သိမ်းကောင်းတာ မကောင်းတာ ကို ကိုရင်ကြီးဘဲဆုံးဖြတ်ပေ တော့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေးပေးတာ မေတ္တာရှိလို. ချစ်လိူု သဒ္ဒါလို.မဟုတ် ဘူး ဆိုတာ ကို ကျုပ်မကြာခဏ လဲ ပြောဘူးပါတယ်၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ အင်္ဂလိပ် ဟိုက်နေလို. အမော ဆို.နေလို.ဘဲ ၊ အမေရိကန်မှ မကယ်ရင် အင်္ဂလိပ်သေချင်း
ဆိုးနဲ. သေတော့ မယ် ဆို တာသိတယ် မဟုတ်လား ကိုရင်ကြီးရဲ. ၊ သမိုင်းကို ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့် ပါအုံး၊ ကိုအောင်ဆန်း ဟာ အားနွဲ.သူအပေါ် အနိုင်ယူသူ
ူပါဆိုရင် သူရဲကောင်း အဆင့် ဆိုတာ အလေးချိန်ပေါ့သွားမယ် ။
အင်္ဂလိပ်တွေ အင်္ဂလန် ကိုပြန်လည်တည်ထောင်ဘို. ချီးက သေးက စလို နေခဲ့
တယ်။ သူတိုရဲ့ Priority ဘာလဲဆိုတာ သူတို.သိတယ် ။ စစ်အပြီး ထုံးစံအတိုင်း
သူတို. ရစရာ ဝေစုလေးတွေ ခွဲဘို.လဲ စီစဉ်ရအုံး မယ် ၊ ကွန်မြူနစ် ချိန်းချောက်
မှူ အန္တရာယကြီးကို ကာကွယ်စရာ တွေ ရှိသေးတယ် ။ ရရင်ရ မရရင်ချ ဆိုတဲ့ ကြွေးကျော်သံ ဟိန်းတဲ့ မြန်မာကွန်မြုနစ် တွေကိုလဲ မြန်မာဆီနဲကျော် မြန်မာ
အရိုးနဲ့ဘဲ ပြန်ထိုးခဲ့တာ မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား။ မြန်မာနိုင်ငံလို မလောက်
လေး မလောက်စား နိုင်ငံကြောင့် ဗြိတိသျှ တို.အိမ်ရေးပျက်မခံနိုင်ဘူး။ တခြား တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေ ကိစ္စတွေ လုပ်စရာရှိနေတယ်၊ ၊ အဲဒါတွေ
ကအစ ဘယ်သူ မွှေးခဲ့တဲ မီးတွေလဲ ? မြန်မာပြည်ဟာ ဘယ်မှ ပြေးမသွားဘူး၊ ပျောက်မသွားဘူး ရှိနေတဲ့နေရာမှ ရှိနေမှာဘဲ ဆိုတာ အင်္ဂလိပ် ကောင်းကောင်း
သိတယ် ။ ဒီအဖြေလောက်ဆိုရင် လုံလောက်ပြီလား ?
ဆရာစံရော ၊ အောင်ဆန်းရော ၊ ကိုစောရော ပျောက်သွားရတယ် ၊သွေးရိုးသား
ရိုးလား ? ယိုးခြင်သူကိုယိုး ၊ စွပ်ခြင်သူကို စွပ် ပေတော့။ ဒီနေ.အောင်ဆန်းရဲ.သမီး အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၀င်ဆန်.နေတာ သွေးရိုးသားရိုး လား ? လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ထင်ခြင်တာ ထင် ယူဆခြင် သလို ယူဆ။ ကျုပ်တို အားလုံးဟာ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေဘဲ အမည်အားဖြင်ပေါ့ဗျာ ။
ဒီနေ.မြန်မာပြည် နဲ့ မြန်မာတွေ ရင်ဆိုင်တွေကြုံနေရတဲ့ ပြသနာနဲ့ အခက်အခဲ ဟာ ဘာတွေလဲ ဆိုတာကို ကျုပ် သမာသမ အကျဆုံးပြောလိုက် တာဘဲ ။ ဒီမိုကရေစီ ဘဲပြောပြော လူ.အခွင့် အရေးဘဲ ဆိုဆို ၊ ပြသနာရင်း ကို သိပေမဲ့ မပြောခဲ့ကြဘူး ၊ သမာသမ ကျလွန်းရင် လူတိုင်း လက်ခံခြင်မှလဲ လက်ခံမယ် ၊ ကိုယ်.ဘက် မယိုင်ရင် ကြိုက်ခြင်မယ် မဟုတ်ဘူး ။ လောကကြီးနဲ့ ကိုင်ပေါက်
ရအောင်လဲ လောက ၃ ပါးကို ကျုပ် မနိုင်ဘူး ၊ လူလောကြီးမှာသမာသမ မရှိ
ကြလို. ရှိအောင်လုပ်ဘို. ပြောဟောနေတာ ဆိုတာလောက် တော့ သိတယ် ၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်သာ ရှိအောင်ကြိုးစားနေရတယ် ။ သူများတကာတွေ ရှိအောင်
သူတိုဟာသူတို.လုပ်ကြဘို.ဘဲ ။ ကိုယ်ကပြော လို.တော့ သူတို.လက်ခံခြင်မှ
လက်ခံ ကြမယ် ကိုး။ သမာသမ ဆိုတဲ့ တလုံးထဲသော စကားနဲ.လဲ မရသေး
ဘူးလေ ၊ ဘာတွေဟာ သမာသမ မကျဘူ. ဘယ်လိုလုပ်ရင် သမာသမ ကျမယ် ဆိုတာလေးတော့ ပါရမှာပေါ့ ။
ဒီနေမြန်မာတွေဟာ ရာဇ၀င်ကြွေးကိုဆပ်နေကြတာပါဆိုတာကို မနေ.က ကျုပ် ရင်နင့်စွာနဲ့ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အာတီကယ်နဲ.မှ သဘောမပေါက်ကြရင် မြန်မာတွေ လေ့လာစရာ အများကြီး လိုသေးတယ် လို.သာ ပြောလိုတယ် ။ ကျုပ်လဲလေ့လာလိုက်အုံးမယ်. လေ့လာစရာတွေ ကတော မကုန်နိုင်အောင်ဘဲ ။
မြန်မာပြည်မှာမွေးရင် မြန်မာတွေ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသား၊ မြန်မာနိုင်ငံသား တွေဘဲ ပေါ့ ။ ၅၅ သန်းမျှသော မြန်မာတွေ အားလုံး ဒီအတိုင်းဘဲ မှတ်ယူ
လက်ခံကြမယ်ဆိုရင်ကို ပြသနာ ၉၅ ရာခိုင်နှူန်းပြေလည်ြ့ပီလို.ဆိုခြင်တယ် ။ မြန်မာပါလို.ပြောရမှာကို ကိုယ့် အိုင်ဒီ ပျောက်ရ တယ် လို.မှတ်ယူသူတွေ
ရှိနေတယ် ဆိုတာ ကိုရင်ကြီးလဲ သိသားဘဲ ၊ ကျုပ်ကတောင် ဗမာပါ ၊ဗမာ
ဆိုတာပျောက်နေပါပြီလို.ပြောတာ ဟာ တမင် ပြောလိုက်တာ ဘဲ၊ ဒီရာဇ၀င်
ကြွေးကို ဆပ်ဘို.မှာ ‘သူရသတ္တိ ‘ ရှိတဲ့ မြန်မာတွေ လိုပါတယ် ။ ချွေးနဲ.တိုက်
စရာ သွေူးနဲ.တိုက်စရာတွေ ရှိနေပါတယ် လို.ပြောခြင်တယ် ။၊ ရေရှည် ဆွဲတိုက်
နေမလား ရေတိုနဲ.အပြတ်ရှင်းမလားဆိုတာ သူရသတ္တိ ရှိတဲ့ မြန်မာတွေပေါ်မှာ တည်ပါလိမ့်မယ်။ တပ်နဲ့ပြည်သူ တသားထဲရှိဘို. လိုအပ်တယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံ
သားဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တာဝန်ရှိစေရမယ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဆိုရုံ ၊ အော်နေရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး ။
ပြည်သူရဲဆိုတဲ့ ပုလိပ် ၊ ပြည်သူတပ်မတော် ဆိုတဲ့ စစ်သားတွေ ဟာ ပြည်သူ
ထဲက ပြည်သူတွေပါ၊ ပြည်သူတို.ရဲ သားသမီးတွေ ပါ ၊ လာတုန်းက လူကောင်း
ကလေးတွေ တပ်ထဲ ခေါ်ပြီး သောက်ကျင်.ဆိုးတွေ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေး
လိုက်လို.ပျက်ဆီးသွာရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ကလာ ကထဲက ပါလာတဲ့ သောက်ကျင်.တွေလား ၊ လမ်းပေါ်ကတေလေဂျပိုးဘ၀က ပါလာတာတွေ လို.ပြောမလား ၊ ၄ ယောက်ပေါင်းမှ တတန်းအောင်တဲ့ အကောင်တွေ လို. ပြော ခြင်လို.လား? ‘နဂိုရှိမှ နဂိုင်းထွက်’ လို.ဆိုတယ် ကိုရင်ကြီးရဲ. ။ ရဲထဲ တပ်ထဲ ကို ဖျက် ဘို.သက်သက် အင်ဖီ(လ်)ထရိတ် ၀င်မလာ နိုင်အောင် လူကြီးတွေက သတိထားရမယ် ၊ စီစစ်ရမယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ထိမ်းမနိုင် သိမ်းမရ. မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမတွေအဖြစ် လွတ်ထားရမှာ လား? အခုတောင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ.အခွင်.အရေးနဲ.လမ်းပေါ်မှာ ပြည့်နေလို.လမ်းပိတ်နေပြီ ၊ငြိမ်းချမ်းကာလ ဆိုရင် တမျိုး ပေါ့၊ မြန်ပြည်ဟာအခြေအနေ တမျိုးဘဲ ၊ တတ်နိုင်ရင် လက်နက်အားကောင်း
ကာလမှာ လူဗြောက် သောက် မလိုပါဘူး ။ လက်နက်ကောင်း တခုနဲ့ထိမ်းသွား
အနော်ရထာ လက်ထက်က ဥသာပဲခူး ကို စစ်ကူ လွှတ်လိုက်တာ ကျန်စစ်သားနဲ့
ပါမှ ၄ ယောက်ထဲ လို. စာဆိုရှိပါတယ်။ ကျန်စစ်သားဖေါက်ပြန်တာ အနော်ရထာ
ကြောင့်လား သူ.သောက်ကျင့်နဲ. သူလား။ သစ္စာမစောင့်တဲ့ ကျ့န်စစ်သားဘဲ မဟုတ်လား။
နောက်ပြီး သယံဇာတ ထွက်တဲ့အပိုင်းက သယံဇာတ ပေါသူတွေက သယံဇာတ
တွေ ကို လက်နက်လုပ်ပြီး တနိုင်ငံလုံးကို ချိန်းချောက်အန္တရာယ် ပေးနေတာတွေ
ဟာ လက်တွေ.တွေ မဟုတ်လား။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ဘယ်နှစ်ခါ ဆွေးနွေး ဘယ်နှခါ လက်မှတ်ထိုးရမှာလဲ ။ မောရင် ရပ် အမေြာေ့ပရင် ထချ တဲ့ ငြိမ်းချမ်း
ရေးတွေ ကျုပ်တသက်မှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ အကြိမ်တွေ တွေ.ခဲ့ရပြီ၊မှန်တာ
ပြောရရင်. ဘာတွေ သဘောတူ ကြတယ် ဆိုတဲ့ အချက်အလက် သဘောတူ
စာရွက်စာတမ်း ကို ပြည်သူထဲက ပြည်သူတယောက်အနေနဲ မတွေ.ဘူး ဘူး ၊
ပြောစရာ က သောင်းကျန်း အဖွဲထဲက သဘောတူသူကတူ-မတူသူကမတူ ဆိုတော့ တူသူကို ပြန်လည်ထူထောင်ပေး ။ မတူသူကိုလဲ ဆက် ဆော်ရုံ ဘဲ ပေ့ါ၊ မရေရာ မသေချာတဲ့ ဆောင်ရွက်မှု ကို ထုတ်ပြန်ရတာခက်တယ် ထင်ပါရဲ.ဲ။ ဒါမှ မဟုတ် တချိန်မှာ လုပ်ချင်တာ လုပ်ရအောင် ၂ ဦး၂ ဖက် အကျိုးဌါ ကြေငြာချက် မထုတ်ပြန်တာလဲဖြစ်ခြင် ဖြစ်လိမ့်မယ်၊
ကရင်ခေါင်းဆောင် ဟန်တားသာမွှေး ၊ လေါ်စစ်ဟန် ။ ဘိန်းဘုရင် ဆိုတဲ့ ခွန်ဇါ တို.လို လူတွေ ဟာ သူတို.လူငယ်တွေ ပေါ်မှာသြဇာ မညောင်းဘူးဆိုတာ ထင်ရှားတယ် ။ တဖက်ကကြည့်ပြန်ရင်. မြန်မာနိုင်ငံရဲ လက်ရှိ အနေအထားမှာ ရှိတဲ့လူ တွေကိုတောင် ဘ၀ အာမခံချက် မပေးနိုင်သေးဘူး ငြိမ်းချမ်းတွေကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ပေးဘို. ဦးစားမပေးနိ်ုင်တာ လဲ ပါ မယ် ။ ဦးနေ၀င်း
လက်ထက်က လုပ်ပေးဘူးတယ် ၅၀/၅၀ ရာနှုန်းအောင်မြင်ပါတယ် ။ န၀တ လက်ထက်မှာ ၀င်လာတဲ့ လူတွေကို ဥပဒေတွင်းက မင်းတို.ပိုက်ဆံနဲ မင်းတို.လုပ်စားကိုင်စားသောက်ကြ နိုင်ငံတော် နဲ့ နိုင်ငံသားတို.(ပရဟိတ) အကျိုးကို
လဲ မမေ့နဲ.လို.ပြောလိုက်ပုံ ရှိတယ် ၊ သူတို.သဘောပေါက် ပုံလဲရှိတယ် ။
ဒါကြောင် နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတို.အကျိုးခံစားရတာတွေ တွေ.နေရတယ် ။ အောင်မြင်မှုတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ယှဉ်ပြောစရာက နိုင်ငံရေးပါတီတွေလဲ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားရင် လွတ်လပ်
စွာ လုပ်ခြင်တာလုပ်၊ စည်းရုံးလှုပ်ရှား ဟောပြောနိုင်ဘို. ဆိုတာ ဘဲ ဖြစ်မယ် ။ မှတ်မိတယ်မဟုတ်လားြ့ပီခဲ့ တဲ့ အပိုင်းက NLD ပါတီဝင် ကပ်ပြားကိုင် သူခိုး ဒါးပြတွေ ခါးပိုက်နှိုက် မုဒိန်းကောင်တွေ က ထစ်ကနဲ့ ရှိ သူတို.ကို NLD ပါတီ
၀င် ဖြစ်လို.ဖမ်းပါတယ်လို. ဟစ်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား၊ NLD ပါတီဝင်ကပ်ပြား
ဟာ ၊ သူတို.ကင်းလွတ်ချက် အကာအကွယ် ဒိုင်းလွှားကြီး လို အသုံးပြုခဲ့ကြ
စတုရန်းမိုင် ၂၆၁ ၂၂၇ အကျယ်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ. မြေတွင်းမြေပေါ်ရှိ အထွေထွေ သော သယံဇါတတွေကို ခန်.မှန်းခြေ ၅၅ သန်းရှိတဲ့ မြန်မာတွေ အားလုံးကပိုင်ဆိုင်တယ်။ ‘ဘုံ ပိုင်ပစ္စည်း’ပါ ဆိုတာကို လက်မခံခြင်ကြတဲ့ သူတွေ ရှိနေတယ်။ ‘ ဘုံ ပိုင်ပစ္စည်း ’ ဆိုတာ ဆိုရှယ်လစ် ကွန်မြူနစ် ဖြစ်သွားပြီ လို ဘာသာပြန်သူတွေကလဲ ပြန်ကြတယ် ။ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက ပိုင်ဆိုင်တယ် ၊အတိုကောက်အားဖြင့် ‘ပြည်သူပိုင်’ ဖြစ်ပါ တယ်ဆိုတာကို သဘောမခွေ.သူတွေ ။ ပြည်သူ.ပစ္စည်း ကို တနည်းအားဖြင့် ပုဂလိက ပစ္စည်းအဖြစ်လိုခြင်ကြသူတွေ တပုံကြီးဘဲ ။ ပြည်သူပိုင် မြေယာ တွေကို ထွန်ယက် သယံဇာတတွေ တူးဖေါ် လုပ်ကိုင် စားသောက်ခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆိုတာက အခွင့်အရေးဖြစ်တယ် ၊ တာဝန်က သမာသမ စာရင်းအတိအကျနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို အခွန်ဘဏ္ဍာ ပေးဆောင်ရမယ်အပါအ၀င် တခြား ပါတ်သက်ရာ
ပါတ်သက်ကြောင်း တာဝန်အရပ်ရပ်ကိုပါ ယူကြရမယ် အလုပ်သမားကို ခိုင်းရူံသက်သက်မဟုတ် သူတိုနဲ့ မိသားစုတိုအတွက် လှူမှူ ဖူလုံရေးတွေလဲ အချိုးကျ တာဝန်ယူပေးရလိမ့်။